Kubatana - Archive - Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions - Week 4 - Shona - Kubatana.net - May 2010
Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 4 - Shona
View week four questions and answers in English here
1. Titsanagurireiwo pamusoro pemhando dzevamiriri dzakasiyana-siyana dzatingawani muBumbiro idzva senge aramende, kana kuti Senate, ne inonzi muchirungu 'Proportional Representation'. Uye, tirikuda kunzwa kuti muchaona sei kuti vanhu havamanikidzwe kuenda kuma polling stations ari munharaunda dzavo kana yave nguva yesarudzo yevamiriri enyika?
Dare redu reParamende rine dzimba mbiri. Kune imba inonzi House of Assembly, koita inonzi Senate. YeHouse of Assembly ine nhengo mazana mairi negumi. Senate inen nhengo makumi masere, nevatatu. Panengo dzese dziri muHouse of Assembly, vanhu vanoenda vachinoti 'ndisarudzeiwo zve.' Anenge awana sarudzo yakawanda kupinda vamwe, ndiye anoenda kuimba iyi. Tichienda kuSenate, mazana matanhatu, ndiwo anosarudzwa. Makumi matatu nematatu, vano domwa; ipapo, pane madzishe gumi nemasere vanodomwa zvakare.
Mibvunzo yatinofanira kuzvibvunza ndeye kudayi:
Chokutanga ndechekuti, isusu senyika yeZimbabwe, tinoda here dzimba mbiri idzi? Chechipiri, toti ivo vanoenda kudzimba idzi, kana imwe chete zvayo, tinovasarudza sei? Chechitatu, toti Bumbiro redu rinofanira here riine vamewe vanosarudza kamwe chete, koita vamwe vanosarudza vanhu gumi kana gumi nemashanu.
Sokufunga kwangu, ndinoona ndichiti tikanyatso tarisa chaizvochaizvo kuona kuti House of Assembly ne Senate zvakamira sei, tichiona Bumiro ririko mazuva ano, ndinoona kuti zvimwe ndezve kungo dzokorora zvinhu. Vanhu vese ivavo vane basa ravari kuita here? Munozoona kuti zvimwe ndizvo hazvo. Asi dei ndanga ndiri inini, zvekuita dzimba mbiri idzi, zvinenge zvisinga nyanye kutibatsire neupfumi hwedu.
Vanhu tinovasarudza sei? Zvinonzi zvatirikuita mazuvano, zvekuti anenge awana vanhu vakawanda ndiye wopinda hazvi nyatsotaridza kuti vanhu varikuda chii. Toti tine mapato mairi, bato rekutanga ne rechipiri. Bato rekutanga, munhu wacho anowana vanhu gumi, bato rechipiri, munhu wacho anowana vanhu vapfumbamwe. Ngatiiti tirikutarira Province ine maeseats mashanu. Moti, ava vakawana mavhoti gumi, vese vakutora maseats ese mashanu. Vakawana mavhoti mapfumbamwe, vakadyiwa saka havachapinda. Munoona kuti hazvinyatsoita zvakanaka. Siyano yevnahu yemapato mairi, munhu mumwe chete. Saka, vamwe vanoti dei tangataati uyu munhu, ngatimupeiwo zvinano tichitarira kuti akawana vasarudzo vakaita sei inonzi 'Proportional Representation'. Izvi zvinoitika kuti tizoti vanhu vese zvavo vanenge vari munyika, vanenge vachit tine chekuita nehutongi wemunyika nokuti tine vanhu vedu vanenge variko. Kana tichinyora Bumbiro remitemo, tione kuti pamwe tasanganisa here yavanoti 'First Past the post', neyavanoti 'Proportional Representation', kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Pekuti tosiya here kuti mumwe akwanise kudoma vamwe, zvinonetsa. Pekutanga tanga, pataitaura nezvizvi, takataura nenyaya yebhuku rinozi 'Animal Farm'. Raitiro, vakatangu vachiti "All animals are equal" kuti mhuka dzese dzakafanana. Asi nekufamba kwenguva, vangavakuzoti "all animals are equal, but some are more equal than others". Saka kana tichiiti tese takafanana, ko kuzoti mumwe ngaadomwe vamwe ten, vamwe fifteen, tavakuti zve tese takafanana, asi vamwe vakanyanya kufanana kupinda vamwe. Havichanyatsoita zvakanaka nebumiro redu remitemo.
Mumwe mubvunzo wakanangana neizvi, ndewe kuti munyaya yesarudzo yaPresident, indava tichiiti vanovhota kuma polling stations ari kumamisha avo. Tikata munhu enda unovhota kwaunoda nekuti urikuvhotera Presdient, haticha ziva kuti vanhu vavhota kangani. Zvinenge zvakanaka kuti tinyatsoona kuti taona kuti munhu avhotera apa, haachakwanisa kuti anede futi kumwe kuno vhota.
2. Mubvunzo wanhasi urikubva kuna Vincent. Ari kuda kunzwa kuti tingadzivirire sei Bumbiro revanhu kubva mukushandurwa-shandurwa sezvakaitwa Bumbiro ratinaro nhasi. Tingaite sei kuti Bumbiro rirege kukanganiswa nevamwe vanenge vachida kuti rivape mukana panyaya dzematongerwo enyika?
Kana tichida Bumbiro remitemo, tinenge tichikarira kuti Bumbiro iri richatishandira kusvikira rini? tinofanira kugara tichiziva kuti pangangove nguva yekuti Bumbiro richinjwe, riitwe 'amended.' Pane zvinhu zvitatu zvatingaite kuti tinyatsoona kuti Bumbiro redu haringochinjwa kana munhu zvake aguta sadza woti ndakuda kuchinja. Chekutanga ndechekudai: tinogona kutaura kuti uyu mutemo uyu, hauzofa wakachinjwa futi. Zvokuti kana zvikaita sei, hauchinje.
Pamwe tingati, hatingadaro, nekuti hatizviziye zvamangwana, ngatitiyi kuti mutemo uyu hauzochinjwa kusvika makore makumi nemashanu apera. Ndochekutanga ichocho.
Chechipiri, nedechekuti tichitarira Bumbiro rega rega, tingaite sei munyaya dzekuchinjwa kwebumbiro iroro. Bumbiro ratinaro mazuvano nderekuti kana tichida zvichinjwe, tichida kuita maamendments iyaya. Kana uine vanhu muzana mega mega, vanhu vanokwana sixty-six kana kuti two thirds, vanofanira kubvumirana nekuchinja ikoko.
Chikuru ndeche kuti tinofanira kunge tichiipa ruremekedzo kuBumbiro remitemo redu. Tinofanira tichiiti munhu wes zvake ngaave anoona kuti Bumbiro iri ndiro rinofanira kuteererwa nemunhu wese, yatinoti 'Constituionalism'. Tikasabvuma kuti Bumbiro iri ndoorino saka kuti nyika yedu ifambe mberi, zvichagara zvichitinetsa.
3. Iro Bumbiro remitemo idza, richati kudii maererano nevanhu vanokonzera mirizhonga yematongerwo enyika?
Ndoda kudzokera kubva muna 2000. ndopakanyanya nyaya dzekushungurudzwa idzodzo. Asi tinoona tichidzokera munhorono yedu yenyika yeZimbabwe, zvekushungurdzana izvi zvino dzokerashure. Chaiko kudzokera kubva kuna 1980 zvichi dzokera shure. Tinotori nemitemo inotaura kuti munhu anoshungurudza mumwe anoitwa sei. Dei kurikuti mitemo iyoyo tayi nyacho isahndisa nemazvo, zvechokwadi zvekushungurudzana izvi zvingadai zvave zvishoma. Asi nekuti nhasi ashungurdzwa, tombotarisa kudivi, ndozinozosaka kuti toita fanika tinsina mutemo inotibatsira.
Zingangove zvakanaka hazvo, kuti patinotarisa bumbiro redu remitemo, tinyatsotaridza kuti hatichada zvakare vanhu vemuZimbabwe kuti tishungurudzane. Chinosaka kuti tiise izvozvo mubumbiro remitemo ndezvekuti tinonyatso taridza isusu kuti nyaya yekushungurudzana inyaya yatinokoshesa, zvirizvo takuisa muBumbiro remitemo.
Zvatakuisa muBumbiro remitemo, tichibva mukushungurudzana, tichipinda munyika itsva, ngationei kuti taisa muchapter yandingati maTransitional Mechanisms kuti tione tagadzirisa nyaya yekushungurdzana.
4. Bumbiro richakwanisa here kuti vaya vakakuvadzwa nekukanganiswa nemhirizhonga yematongerwo enyika vabhadharwe?
Iyezvino tine Bazi rino fanira richiita basa iroro, reOrgan On National Healing. Asi vamwe varikubvunza kuti kobazi iri ririkupi, zvirkufambiswa sei? Zvandingango taura ndezve kuti tine mapazi anofanira achifambisa basa iri. Asi tinenge tisiri kuita izvi nemazvo kuti vanhu vakakanganiswa vanoitwa sei. Saka kana tichnyora Bumbiro redu remitemo, ngationei kuti raita zvinhu zvandingati zvinhu zviina.
Chekutanga, ndechekuti Bumbiro redu remitemo ranyatso taura kuti izvi hatizvide. Tichaita mitemo inotaridza kuti tapa udzamo kuti zvinhu zvekushungurudzana hatizvide.
Chechipiri, kana paine vanoramba vachingoshungurudza vamwe, toona kuti panyatso onekwa kuti kana paine vanhu vanoona kuti vanyatsonzvera, kuona kuti chaizvo-chaizvo kushungurudza uku kurikuitwa nani, sei.
Chechitatu, toona kuti ivovanhu varukushungurudzwa ava, tanyatso kwanisa here kuti tiiti kana waitwa zvakadai, iwewe uchazo kwanisa kuti uitirwe zvakadai. Kuti zvawaitwa zviya zvive zviri zvhinhu zvisingazoitika futi.
Chechina, chekugumisira ndechekuti ngationei kuti ivo vanhu vanoshungurudza vamwe, tavaendesawo pamberi pevamwe pakuti vanhu vazhinji vaone kuti kana ukashungurudza vamwe, either uchasungwa nemapurisa, kana kuti uchaenda kwashe, kana uchaenda papi zvako kuti tione kuti zvinhu izvi handi zvekungoti munhu anoita zvaanoda.
5. Nhasi mubvunzo wabva kune vanhu vakawanda vanosanganisira, Reason, Robert, Kudzai naGift. Vanobvunza kuti; chii choitika kana Bumbiro idza richi tsigirwa nevahu asi Paramende yoriramba. Kana kuti Paramende ytsigria Bumbiro racho, asi rorambwa nevanhu?
Zvandaita ndezvekuti ndichipindura mubvunzo uyu, ndikutaurirei kuti chokutanga ndechekuti iyezvino patiri takuenda pachinhano cehkuno bvunza vanhu kuti varikuda chii muBumbiro remitemo, yatinoti Outreach Programme. Patinobva paOutreach, pane matano mana atinofanira kupinda maari tisati taburitsa Bumbiro remitemo.
Dano rekutanga, nderekuti tichibva muOutreach tichanyora Bumbiro iri ratichaenda naro kune yatinoti 'Second All Stakeholders Conference'. Ungano iyi ichaona kuti Bumbiro ranyorwa, riri kunyatso taura here zvakataurwa nevanhu patakano tapa Mazwi avo muOutreach Programme. Kana ungano yapedzene basa rayo, Bumbiro iri richaenda kuParamende. Chinhano chechipiri hachisvikike kana Second All Stakeholders Conference ikarega kutsigira bumbiro idza. Tabva kuParamende, toenda kuReferendum. Kana kuReferendum vakati aiwa, Paramende yatsokodzera-tsokodzera Bumbiro, harisiro rakabva ku All Stakeholders Conference zvatopera ipapo. Kana Bumbiro ratsigirwa kuReferendum, richazoenda zve kuParamende kuti rigoonekwa kuti raita 'pass through Parliament,' roitwa yatinoti 'Formal Adoption'.
Saka nhano dzandataura idzi dzinofanira kupindirana. Kanadzikasa pindirana, hatina Bumbiro remitemo. Saka ngatione kuti dzapindirana.